I-Kid3 3.8.3 iza neempendulo ezimbini ezintsha, imowudi emnyama, iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kunye nokunye | Ubunlog
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yomhleli weelebheli yomthombo ovulekileyo Kid3 3.8.3 yaziswa, inguqulelo eza notshintsho oluncinci kodwa ezinye zazo zibaluleke kakhulu njengoko ziphucula ukusebenza kwesicelo. Kulabo abangazi I-Kid3 Kuya kufuneka bayazi ukuba le nto sisimahla, iqonga lomnqamlezo kunye nomthombo ophawulayo womculo ophathwayo Isebenza kwiLinux (KDE / Qt), MacOS, Windows, kunye ne-Android.
NgoKid3 Umsebenzisi unokumakisha ngokulula iifomathi zeefayile zomsindo ngaphandle kokuchwetheza ulwazi olufanayo kaninzi. Esi sisixhobo esiluncedo kakhulu xa ufuna ukuphawula umthamo omkhulu weefayile zeaudiyo ngeenjongo ezahlukeneyo.
I-Kid3 GUI inefestile enye enesakhiwo esichazwe kakuhle, apho unokusebenzisa khona isikhangeli sefayile, ukujonga ifolda, okanye ukutsala kunye nokulahla ukungenisa iingoma kwindawo yokusebenza. Okwangoku ixhasa phantse zonke iifomathi zefayile yeaudio: MP3, Ogg / Vorbis, FLAC, MPC, MP4 / AAC, MP2, Opus, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, WAV, kunye ne-AIFF (umzekelo, ii-albhamu ezipheleleyo).
I-Kid3 ikwalayishwe izinto ezahlukeneyo apho unokuguqula phakathi kweenguqu ezahlukeneyo ze-ID3. I-Kid3 ikhanya kakhulu kwimithombo yenkqubo njengoko isebenzisa ixabiso eliphantsi ukuya kumodareyitha le-CPU kunye nenkumbulo yenkqubo. Inobuntununtunu kwizitshixo kunye nemicimbi yeempuku, kwaye ibandakanya ifayile yoncedo yabasebenzisi abanamava.
1 Yintoni entsha kwiKid3 3.8.3?
2 Uyifaka njani i-Kid3 Tag Editor 3.8.3 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Yintoni entsha kwiKid3 3.8.3?
Olu hlelo lutsha lwe-Kid3 3.8.3 ngu iboniswe ngeendlela ezimfutshane ezinqumlayo kunye nezikripthi isenzo somsebenzisi, esenza ukuba kube lula ukuhamba phakathi kweefayile kunye necandelo lethegi.
Ngaphandle koko ukubandakanywa kweempendulo ezintsha ezi-2 kuyabonakala loo msebenzi xhasa izihloko zesiNgesi iilebheli kwaye uguqule iiteki ze-ID3v1 ziye kwi-ASCII.
Olunye lotshintsho olubonakalayo kule nguqulo intsha ye-Kid3 3.8.3 yile ukwaziswa kwendlela entsha emnyama Kwaye zaphunyezwa izincedisi ezahlukeneyo kwimixholo yesiko kunye nenye baguqulela ujongano lomsebenzisi kunye nesikhokelo kwiilwimi ezintsha (isiKorea nesiSweden).
Kananjalo nakwiimbalasane zokuba usetyenziso sele ixhasa ukukwazi ukutsala imiqolo emininzi yokubhaliweyo okuphezulu kwitafile yokungenisa kunye nokukwazi ukunika igama kwakhona iifayile zokufunda kuphela.
Okokugqibela, isibhengezo sikwakhankanya ukuba ulungiso lwebug oluncinci luphunyeziwe. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-Kid3 Tag Editor 3.8.3 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo abanomdla wokukwazi ukufaka esi sicelo kwi-Ubuntu, kwi-Linux Mint nakwiziphumo zazo. Kuya kufuneka bayazi loo Kid3 Iyafumaneka kwi-PPA onokuyifaka ngokusebenzisa le miyalelo ilandelayo kwi-terminal.
Kule nto Siza kuvula itheminali kwinkqubo kunye nezitshixo ezinqumlayo Ctrl + Alt + T kwaye kuyo siyachwetheza:
Emva koko siya kuhlaziya uluhlu lwethu lweephakeji nge:
Okokugqibela sinako ukwenza ufakelo dEsi sicelo sisebenzisa naluphi na olu khetho lulandelayo, eyokuqala yeyabo banendawo ye KDE desktop:
Ukuba abangobasebenzisi be KDE ungayifaka ingxelo ye-qt kwinkqubo yakho nge:
Okanye kwabo banomdla othanda i-terminal, banokukhetha i Inguqulelo ye-CLI:
Enye indlela yokufaka esi sicelo kukudibanisa koku kwezixhobo zethu kwaye koku kufuneka sifumane ikhowudi yemvelaphi.
Singakwenza oku ngokuvula i-terminal kwaye siza kuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Kwaye ngoku siza kufumana ikhowudi yesicelo kunye:
Senza ifolda entsha apho siza kuqulunqa:
Singena isikhombisi esandula ukwenziwa:
Kwaye ekugqibeleni siyaqhubeka ngokuqokelela ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » I-Kid3 3.8.3 iza neempendulo ezimbini ezintsha, imowudi emnyama, iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kunye nokunye okuninzi
Uphicotho-zincwadi 2.4 ifika nepaneli yexesha elitsha, umboniso wesandi kunye nokunye